K B ४ ६ ?
अंग्रेजी र नेपाली मिसाएर K B ४ ६ भन्दै भीत्तामा कोर्दै हिडेको टन्ने देखेको छु। रमाइलो लागेर लेखेको हो या कुनै कारण हो त्यो त लेख्ने मानिसलाइ नै थाहा होला। तर ह्यां लेखेको कारण चाहिं जनबरी १४मा पर्ने दौंतरीको १०० दिनमा के गर्ने भनेर सोधेको हुं। सबै संग यसको बारेमा इमेल गरेको थिए, सबै खाले उत्तर साथ इमेल प्राप्त भए। सबै लेख्ने मानिसले केही स्पेशल कुरामा लेख्ने अनि पाठकले त्यसमा बिचार थपेर १०० दिन मनाउने भन्ने बिचार आएको थियो। अथवा सबैले भिन्दै भिन्दै बिषयमा लेखे कसो होला, अर्को बिचार आएको थियो। फेरी थप बचार थियो अहिलेको तातो संबीधान सभाको बिषयमा सबैले बिचार पोखे कसो होला? सबै बिचार राम्रा छन, यो १०० दिनमा कुनै यस्तै केही गरेर धुमधाम संग मनाउनु पर्छ। यसो बुझ्दा सबैले केही न केही लेख्दा एक्दमै राम्रो हुने देखें अनि कसैले संबिधान सभाको बारेमा लेख लेखेमा लेख्ने, पढ्ने सबैले बिचार बाढ्न मिल्थ्यो। यस बाहेको अरु केही छ भने पनि भन्नुहोला, दौंतरी सबैको साझा ब्लग हो, यसमा सबैको बिचारको कदर हुन्छ।